အိမ်ဖော် / အိမ်သုံးကူညီသူအတွက်ထိပ်ဆုံးဝှက်ထားသော SPY ကင်မရာများ OMG Solutions
Monitor Maid / Domestic Helper အတွက်ထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံးဝှက်ထားသော SPY ကင်မရာများ
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်များ၌အိမ်ဖော်များနှင့်အိမ်ဖော်များတိုးပွားလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကလေးများအားနှိပ်စက်ခြင်း၊ မသင့်လျော်သောအစားအစာများကိုကျွေးမွေးခြင်း၊ ထို့ကြောင့်လူနေအိမ်နှင့်စီးပွားရေး CCTV စနစ်များသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုများပြားလာသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအချို့သောစစ်ဆေးမှုများနှင့်ချိန်ခွင်လျှာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အတှကျအရေးကြီးသောဖြစ်လာသည်။ အခြားရွေးချယ်စရာများစွာအနက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်များတွင် CCTV ကင်မရာများထားရန်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူဘတ်ဂျက်၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းစသည့်အချက်များကိုသင်စဉ်းစားရန်မည်သည့် CCTV ကင်မရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းပေါ်ပေါက်လာသည်။
OMG Super Night vision WIFI USB Charger ကင်မရာSPY306)
ခေတ်သစ်ခေတ်အပြောင်းအလဲများကြောင့်လူတိုင်းသည်အခြေအနေများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများကိုရယူလိုကြသည်။ ပြီးတော့လုံးဝလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ကင်မရာထက်ပိုပြီးဘာတွေကပိုပြီးစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းပြီးညအချိန်တွင်ပင်သင်အသုံးပြုနိုင်သောအားသွင်းနိုင်သည့်အရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်၍ ပို၍ သေးငယ်စေနိုင်သနည်း။ ဟုတ်ပါသည်၊ SPY306 Camera သည်အလွန်လွယ်ကူသောအရွယ်အစားအပြင်ရိုးရှင်းသော interface တစ်ခုပါရှိသည်။ ၎င်း၏ချောချောမွေ့မွေ့ဒီဇိုင်းသည်အချို့သောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်ရှာဖွေမတွေ့ရှိနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီဟာကဘာလဲ ၎င်းမှာစူပါညဥ့်နက်သည့်မြင်ကွင်းပင်ပါရှိသည်။ မင်းဟာငြိမ်သက်မှုအပြည့်နဲ့အိပ်နေဖို့သေချာပါတယ်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်အသုံးပြုသောသာမန် USB Charger ဖြင့်အားသွင်းနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးအသုံးပြုနိုင်သည်။
OMG WIFI နာရီကင်မရာ (SPY297)
ပတ်ဝန်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ရော။ မရောနှောနိုင်ပါကလုံခြုံရေးကင်မရာသည်ဘာအတွက်လဲ။ သင်၏ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူ (သို့) သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) ကလေးများအားအန္တရာယ်ပြုရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသူတစ် ဦး သည်၎င်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုသတိမပြုမိလျှင်၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောအဆင့်ကိုသာပေးနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအချက်များတွင် SPY297 သည်၎င်း၏အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်ရေဒီယိုစပီကာ၏အရွယ်အစားရှိပြီး၎င်းကိုလုံးဝမတွေ့ရှိနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းကို WIFI စနစ်မှတဆင့်တက်တက်ကြွကြွထိန်းချုပ်ထားပြီး ၄ င်းကိုတက်ကြွစွာထိန်းသိမ်းထားပြီးသင်၏အချက်အလက်အားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်သာမက၎င်းသည်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်ဗွီဒီယိုများကိုလည်းသူတို့ထုတ်လုပ်သည့်သို့မဟုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အမှန်တကယ်ရက်စွဲနှင့်အချိန်နှင့်တံဆိပ်ထုသည်။ ၎င်းသည် Bluetooth ကဲ့သို့လုံးဝလုံခြုံမှုရှိခြင်းနှင့်အတူခဏပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အသုံးပြုနိုင်ရန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ကြီးမားသောဖျော်ဖြေရေးလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။ သို့မှသာသီချင်းဖွင့်နိုင်ခြင်း၊ ပျင်းရိခြင်းကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်ရေဒီယိုများတပ်ဆင်ခြင်းတို့ဖြင့်အသံလွှင့်ဌာနအမျိုးမျိုး၌ကစားနိုင်သည်။ မည်သည့်အစက်အပြောက်နှင့် lit အခါသမယ lit! အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ဤသည်သည်အကောင်းဆုံးနှင့်လုံခြုံရေးနှင့်ပေါင်းစပ်သည့်ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်!
Wifi သည်ယနေ့ခေတ်အိမ်တိုင်းတွင်အဖြစ်များလာသည်။ ၎င်းသည်လူနေအိမ်၊ ရုံးခန်းသို့မဟုတ်ယာယီနေရာတစ်ခုဖြစ်သည့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ပုံစံဖြစ်သော WIFI ပင်လျှင်အခြားမည်သည့်ကဲ့သို့သောလုံခြုံမှုကိုပေးနိုင်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ SPY296 ဖြင့်မှန်ကန်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာလုံခြုံမှုရှိခြင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အားလုံးကိုသတိပြုမိခြင်းများရှိစဉ် WIFI ကိုမရပ်မနားခံစားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဗီဒီယိုများအား 4K resolution အထိအထိမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ အရာအားလုံးသည်သင်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိနေသည်ကိုသေချာစေရန်သင်လိုအပ်သည့်အကောင်းဆုံးအစွန်းကိုပေးသည့်အတွက်အစက်အပြောက်ရှိမည်သူ့ကိုမျှမကြည့်နိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို android device သာမက IOS စမတ်ဖုန်းနှစ်ခုလုံးမှထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ သို့မှသာမည်သည့်သာမန်လူကိုမှအလွယ်တကူသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ SD card slot တစ်ခုအပိုသိုလှောင်ရန်အတွက် 128 Gb အထိတိုးချဲ့နိုင်ပြီးသင်နှင့်သင်ကူးယူလိုသည့်မည်သည့်အချက်အလက်အမျိုးအစားကိုမဆိုအသုံးပြုရန်သေချာသည်။ ၎င်း၏ချောမွေ့ပြောင်လက်သော wifi router ဒီဇိုင်းသည်၎င်းကိုလုံးဝရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မလွယ်ကူပါ။ သင်၏အခန်း၊ ရုံး၊ အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောနေရာမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုထည့်သွင်း။ မည်သည့်အားထုတ်မှုမှမပါဘဲအဖြစ်အပျက်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ပါ။
OMG WIFI Bluetooth စပီကာသူလျှိုလျှို့ဝှက်ကင်မရာ (SPY263)
တေးဂီတသည်ယနေ့လူတိုင်း၏ဘ ၀ ၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ လူတို့သည်အိမ်၌ပျင်းသောအခါ၊ အထူးအခါသမယများနှင့်အဖြစ်အပျက်များတွင်လူတို့သည်ယင်းကိုနားထောင်ကြသည်။ ဒီခေတ်သစ်ခေတ်တွင်နေရာတိုင်းရှိလေထုထဲတွင်တေးဂီတ။ ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်စေ၊ လူကြီးဖြစ်စေ၊ လူတိုင်းတွင်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ ဂီတဖွင့်စက်များအတွက် Bluetooth စပီကာများကိုအချိန်နှင့်အမျှမိတ်ဆက်ပေးပြီးသင်အကြိုက်ဆုံးဂီတကိုဖွင့်ရန်သင့်ဖုန်းသို့မဟုတ်လက်တော့ပ်မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်ယနေ့ခေတ်အရောင်းရဆုံးအမြင့်ဆုံးတွင်ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဤကဲ့သို့သောအဖြစ်များသည့်အရာများသည်လုံခြုံရေးအတွက်လည်းကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီး SPY263 ၀ င်ရောက်သောအခါဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Bluetooth နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောတေးဂီတဖွင့်စက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ဖျော်ဖြေရန်တစ်စက္ကန့်မျှမကွဲဘဲလုံခြုံရေးကင်မရာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် DNBX Atmos တေးဂီတဝန်းကျင်နှင့်တေးဂီတ၏အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်နှင့်အတူသင်၏မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိစေရန် 4k resolution ဗီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်၊ သင်၏မိသားစု ၀ င်များသို့မဟုတ်သင့်ရုံးအိမ်ထောင်ဖက်များကိုဖျော်ဖြေရန်အတွက်လုံခြုံသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
OMG HD 1080P ဆလင်ဒါလုံခြုံရေး Wi-Fi ကင်မရာ (SPY204)
ငါအစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Wifi သည်ယနေ့လူ၏နေ့စဉ်ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုံခြုံရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ SPY204 သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလှည့်နေသော Cylinder Security WIFI ကင်မရာဖြင့်အခြားအဆင့်သို့တက်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူကိုသူအလိုရှိသည့်နေရာတွင်နေရာမရွေးစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲ၎င်းကို 1080 ရှုခင်းတစ်ခုလုံးကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည့်လှည့်ထားသော 360p မှတ်တမ်းတင်ကင်မရာဖြစ်သော၎င်း၏ပထမဆုံးကင်မရာအကြောင်းပြောကြစို့။ ၎င်းသည် 5000mah ဘက်ထရီပါ ၀ င်ပြီးပုံမှန်ကင်မရာများထက်ပိုမိုကြာရှည်စွာဆက်နေရန်အတွက်ကင်မရာအတွက်အလွန်ကြီးမားသည့်ပမာဏဖြစ်သည်။ သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက်အပူချိန်ညှိစက်သို့မဟုတ်ယင်းအတွင်း၌တည်ဆောက်ထားသည့်စိုထိုင်းဆကိုပြောပြသည့်အက်ပလီကေးရှင်းအချို့ပါရှိသည်။ တိုတိုပြောရရင်ဒီကင်မရာဟာပျံသန်းတဲ့မောင်းနှင်တဲ့အဝိုင်းနဲ့တူတယ်။ သင်သည်၎င်း၏ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ နာရီပေါင်းများစွာနာရီအစဉ်မပြတ်စီးဆင်းနေသောကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏ကြီးမားသောဘက်ထရီအရွယ်အစားကြောင့်ချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်နေရာ၌ဖြစ်စေစီးပွားရေး၊ ရုံးသို့မဟုတ်အိမ်တွင်ဖြစ်စေအသုံးပြုမှုအတွက်ကျစ်လစ်သည်။
OMG WIFI အားသွင်းစက် (SPY165)
အထက်ဖော်ပြပါထုတ်ကုန်များတွင် WiFi မှတစ်ဆင့်လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သောဆွေးနွေးမှုများအားလုံးနှင့်အတူ။ WIFI ကိုပုံမှန်အတိုင်းအသုံးပြုနေချိန်မှာတောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုလုံခြုံစိတ်ချရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါပြောရင်လူတိုင်းကိုဘယ်လိုစောင့်ကြည့်နိုင်မလဲဆိုတာပိုပြီးလျှို့ဝှက်တဲ့နည်းရှိသေးတယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်။ မင်းအခန်းထဲမှာလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်နေရာကိုရှာမလဲ? ထို့ကြောင့် SPY165 သည်ကျော်ကြားသောကြောင့် WI-FI ၏လုံခြုံရေးအစား၎င်းပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနေစဉ်၎င်းကိုသင့်အားပေးသော charger ကိုလုံခြုံစေသည်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏ဆန္ဒအရ 1080p, 640p သို့မဟုတ် 240p ကဲ့သို့အရည်အသွေးအမျိုးမျိုးကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်သာမက၎င်းသည် WIFI တစ်စက်တည်းကျဆင်းခြင်းမရှိစေရန်သေချာစွာ wifi charger အဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ WIFI နှင့်လုံခြုံရေးအဆင့်များရှိသင်၏ဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ရူးသွပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်သင်၏နေ့စဉ်ဘ ၀ အရာများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ပျော်မွေ့နေစဉ်အရာဝတ္ထုများကိုပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှုရန်အလယ်အလတ်ရှုထောင့်မှရှုထောင့်တစ်ခုရရန်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
OMG Hidden သူလျှိုစာအုပ်ကင်မရာ (SPY004)
အကယ်၍ သင်သည်သူ၏ရုံးခန်းနေရာတိုင်း၌များစွာသောဖိုင်များနှင့်များသောအားဖြင့်ဝိုင်းရံနေသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၊ သို့မဟုတ်သူတို့၏ privacy ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးခံရခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ လူတို့၏စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှုကိုမခံရဘဲလုံခြုံရေးကိုသေချာစေလိုသောစာကြည့်တိုက်တစ်ခုတွင်သင်အလုပ်လုပ်နေလျှင် SPY004 ထက်သင်လိုအပ်သည် ။ ယခုသင်သည်ဤကင်မရာနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ထူးခြားသည့်အရာက၎င်းကိုထူးခြား။ ရှာဖွေမတွေ့ရှိနိုင်သောအံ့? စရာဖြစ်အောင်စဉ်းစားနေပြီလား။ မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုစာအုပ်များနှင့်နဂိုအတိုင်းရှိနေရန်ခွင့်ပြုပေးသည့်အပြင်၎င်းသည်ချောမွေ့သောဒီဇိုင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောရောင်ပြန်ဟပ်မှုပစ္စည်းများသည်သင့်စီးပွားရေးနှင့်ရုံး၏စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုဘဲထောင့်တိုင်းမှရှုထောင့်များကိုလည်းပေးနိူင်သည်။ ။ 10,000 mah Battery ပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင်အားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်အပြင်သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုမိုလုံခြုံမှုရှိစေရန်ကင်မရာကိုတက်ကြွစွာမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းထားရန်အချိန်ပိုပေးသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ ဒီမှာ gadget ကို။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အလင်းရောင်မရှိသောညဘက်အမြင်အာရုံနည်းပညာနှင့်အတူ တွဲ၍ လာသည်။ ကင်မရာသည်ညအချိန်တွင်လှုပ်ရှားနေလျှင်ပင်ဗီဒီယိုများ၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုရရှိစေသည်။ အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှုအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်သောမျိုးစုံ၊ SD ကဒ်သည် 128 GB အထိထောက်ပံ့ပြီးအစစ်အမှန်လျင်မြန်သောရိုက်ချက်များအတွက်ကွင်းဆက်ရိုက်ကူးမှုကိုမှတ်တမ်းတင်သည်။ ထိတ်လန့်စရာမလိုပါ! ၎င်းသည်သင်၏လုံခြုံရေးကိုတောင်းဆိုရန်အားလုံးပြုလုပ်နိုင်သည်။
OMG 4K WIFI ပါဝါဘဏ်ကင်မရာ (SPY175)
ပါဝါပြproblemနာသည်ပါကစ္စတန်နှင့်အခြားပြည်နယ်များတွင်ပြtopနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးမကြာမီကပင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုသည်ထိပ်ဆုံးမှကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးကတည်းက Android စနစ်သည်ရေကဲ့သို့အားသွင်းခြင်းကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်လက်တော့ပ်များတွင်ထိန်းချုပ်ရန်အလွန်ခက်ခဲလာသည်။ ။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်လူများသည်များသောအားဖြင့် Powerbanks ကိုဖုန်းများပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လျှပ်စစ်မီးမရှိလျှင်သော်၎င်း၊ လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်သော်လည်းသော်၎င်းသူတို့၏ဖုန်းများအားရှင်သန်နေစေရန်ရည်ညွှန်းသည်။ ၄ င်းတို့သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများဖြစ်ပြီးသင့်ဖုန်းကိုမည်သည့်အချိန်၌မဆိုသယ်ဆောင်နိုင်ပြီးအရေးကြီးသည့်အီးမေးလ်များ၊ ဒါပေမယ့် Powerbanks ကသင့်ရဲ့လုံခြုံရေးစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ရင်ကော။ SPY175 သည်ဤအချက်အတွက်ထင်ရှားသည်။ ၎င်းတွင်သင့်တွင်သင်၏အလုပ်နှင့်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲတစ်ချိန်တည်းမှာရူးသွပ်သောအရည်အသွေးကိုအာမခံသော HD 4k resolution ကင်မရာတစ်ခုပါရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်ပြီးလူများအားလူများအားအမှန်တကယ်သိရှိစေရန်မပေးပါ။ Maid များ၏ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်သင်၏ကလေးများကိုသူတို့အနိုင်ကျင့်သည့်နည်းများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သင်ကအိမ်တွင်းရှိမည်သည့်အခန်းတွင်မဆိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုလုပ်နေစဉ်သင့်မျက်စိကိုစောင့်ရှောက်ရန်အားသွင်း။ ထားပါ။ ၎င်းတွင်၎င်းတွင်ပါဝင်သည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။ လှုပ်ရှားမှုရိုက်ကူးသည့်ကင်မရာကဲ့သို့၎င်းသည်သင်ထားသည့်နေရာတွင်လှည့်လည်သွားလာနေစဉ်မည်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုကိုမဆိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ အပြင်ဘက်အလင်းရောင်မရှိသည့်အချိန်များတွင်ပင်အရာများကိုတောက်ပနေစေရန်လည်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောညဘက်မြင်ကွင်း။ ဒါကကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ထရီအတွက်မဟုတ်ရင်ဒါတွေအားလုံးအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီ CCTV လေးမှာ 10,000 mah battery ပါ ၀ င်ပြီးအပြည့်အ ၀ ထုပ်ပိုးပြီးလူတိုင်းကိုသူ့ကင်မရာရဲ့မျက်လုံးအောက်မှာထားနိုင်အောင်!!
OMG Mini ကြိုးမဲ့ WIFI သူလျှိုလျှို့ဝှက် pinhole ကင်မရာ (SPY032)
လုံခြုံရေးနှင့်ကင်မရာများအကြောင်းပြောခြင်းနှင့်အရာအားလုံးကိုလျှို့ဝှက်ထားခြင်းရှိမရှိသေချာစေရန်လူများ၏မျက်လုံးများမှသင်မည်သို့ရှောင်နိုင်ကြောင်းနှင့်သူတို့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာတကယ်သတိမထားမိဘဲသို့မဟုတ်သင်သူတို့ကိုမျက်လုံးချင်းကြည့်နေမည်ဆိုလျှင်၊ pinhole ကင်မရာကျွန်တော်လုပ်နိုင်ပါတယ်!? မင်းရဲ့ရှပ်အင်္ကျီ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ ကိုယ်ထည်နဲ့ဂျက်လေယာဉ်တွေဘယ်နေရာမှာမဆိုရှိနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောကင်မရာအမျိုးအစားကတော့ဘယ်သူမှရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သင့်ရဲ့မတ်မတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဒီအရာရှိလေးက 70 ကိုနာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်ဆက်တိုက်လှုပ်ရှားနေစေဖို့ဘက်ထရီလုံလောက်စွာထည့်ထားပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်သောအရာသည်စွမ်းအင်မည်မျှကိုကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ထားနိုင်ခြင်းသည်ရူးသွပ်ပါသည်၊ သို့သော်၎င်းသည် Lil ၌သာပိုင်ဆိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ 1080p ရွေ့လျားမှုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကင်မရာနှင့်အတူ၎င်းင်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်၌လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကိုသတိပြုမိစေရန်နှင့်တိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားရန်လိုအပ်သည်။ သင်က၎င်းပတ် ၀ န်းကျင်ကို ၀ တ်ဆင်သည့်အခါထောင့်တိုင်းသည်သင့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိနေစေရန်သေချာစေသည်။ သင်၏ကလေးများ၊ မိသားစု ၀ င်များ၊ ရုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ရန်နှင့်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ကလေးများသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်အားအန္တရာယ်ပြုလိုသူများကိုရှာဖွေရန်သင့်အားအားသာချက်တစ်ခုပေးသည်။ ၎င်းကို WIFI ကထိန်းချုပ်ထားပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အဝေးမှနေနှင့်ဝေးဝေး၌ပင်၎င်း၏ interface နှင့်ချိန်ညှိချက်များကိုအစောပိုင်းကစီမံခန့်ခွဲရန်ပြုလုပ်သည်။ ဒါ့အပြင်အရာအားလုံးကိုသင့်မျက်လုံးအောက်မှာရှိနေစေဖို့သေချာနေချိန်မှာလည်း classy ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကသင့်အတွက်ပဲ။
OMG WIFI ကွန်ယက် Bluetooth Speaker ကင်မရာ (SPY208)
SPY208 သည်သင်နှင့်သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမည်သူမဆိုသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာကိုထိခိုက်စေရန်မည်သူမျှသံသယ ၀ င်စရာမလိုဘဲမိမိကိုယ်ကိုဖျော်ဖြေရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုလည်းပေးသည်။ လှပသောဒီဇိုင်းကြောင့်မည်သူ့ကိုမျှမျက်လုံးပြူးသွားမည်မဟုတ်ချေ။ ဟုတ်ပါသည်၊ SPY208 သည်ဖျော်ဖြေမှုကိုအာမခံနိုင်စေရန် Bluetooth ဂီတစပီကာနှင့်တွဲဖက်ထားသည့် WiFi ဆက်သွယ်ထားသောကင်မရာဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးတွင်ရှိနိုင်သည်။ အရာအားလုံးကိုနဂိုအတိုင်းထားရှိရန်နှင့်သူတို့၏လုံခြုံရေးအဆင့်သည်အမြဲတမ်းမြင့်တက်နေကြောင်းသေချာစေရန်၎င်းတို့ကိုသင်ကြည့်ရှုနေစေရန်သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုစာသားနေရာတိုင်းတွင်ထားနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင့်ကလေးများကိုကစားနေစဉ်ပင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့် pixels ကိုမဆိုချိုးဖျက်ခြင်းမပြုရန်သေချာစေမည့် HD recording ကင်မရာနှင့်အတူလာသည်။ မကောင်းသောလုပ်ရပ်များနှင့်မကောင်းသောလုပ်ရပ်များဖြင့်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုထဲသို့လျှောကျသွားနိုင်သည်ဟုထင်သောသူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုချိုးဖျက်နိုင်သည်။ သင်၏အနေဖြင့်သင်၏သီချင်းနှင့်သင်၏ကင်မရာဖြင့်သင်ကူးယူသောဗွီဒီယိုများကိုနှစ်သက်ရန်လိုအပ်သည့်သိုလှောင်မှုကိုသာရရှိရန်အတွက်ဤအရာသည် 128 GB အထိ SD ကဒ်ကိုထောက်ပံ့သည်။ ဒါကလုံးဝဂရုမစိုက်တဲ့အချိန်မှာတောင်ထောင့်တိုင်းကိုတကယ်ဖုံးအုပ်ထားနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူဆိုးလေးကအရာရာတိုင်းကိုသင့်အတွက်ကင်မရာရဲ့မျက်လုံးအောက်မှာထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
4227 စုစုပေါင်း Views စာ4Views စာယနေ့တွင်